Home » Creative Writing » ခင်ရာဆွေမျိုး
same to your feeling …. Thaw
အမုန်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အချစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်…
တွေ့ ဆုံ ကြုံ ခွဲခွာ ကြရတာ လူ့သဘာဝပါ
ကျုပ်ကတော့.. မန်းဂဇက်ရွာသူားတွေကို.. ဆွေမျိုးတွေလိုပဲသဘောထားပါတယ်…။
ဒီကမ္ဘာမှာ ဘယ်အရာတည်မြဲသလဲလို့တစ်ယောက်ထဲ တွေးမိတော့ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ယုံကြည်တာတွေ မရေရာဘူး ချစ်ရယ်… အလဂါးးးးးးး :byee:
.ရွာသူားတွေက အပြင်မှာတွေ့လည်း ဆွေမျိုးရင်းချာလို ရင်းနှီးခင်မင်ကြကြောင်း..လက်တွေ့ :))
စိုသောလက် မခြောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့/ကြိုးစားနေ/ကြိုးစားမှာပါပဲ။
အာ့ဒေါင် ဘာလို့ခြောက် ခြောက်သွားဂျတာလဲ……. တောက်စ်
ရေသန့်ဘူးတွေ ကလည်း ဈေးကြီးတယ်လေ။
ခြောက်သောလက်ကို စိုအောင်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ
နာ့ ဆီမှာလေ ဟန်း ဒရိုင်ယာတွေ အများကြီး ရောင်းရန်ရှိ။
ရွာထဲမှာ ရေးကြဖတ်ကြရင်းနဲ့ ရွာသူားတွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ချင်းရင်းနှီးလာကြရတယ်။
(နောက်တာ အတည်) :p:
မနန်း ပြောနေတာ အရီး ဖြစ်ခဲ့ သလိုဘဲ။
စကားတောင်စားလေးတွေ အကြောင်း မပြတ်ရေးပြ နေရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ :))
ခင်ရာ ဆွေမျိုး မြိန်ရာ ဟင်းကောင်းပေါ့ မနန်းရယ်
ငယ်ဘဝက တကသိုလ်ထိ သူငယ်ချင်းတွေပြန်စဉ်းစားတာ… နာမည်တွေတောင်..သိပ်မမှတ်မိချင်တော့.. သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ပုံများ…
ဂဇက်က အချို့ကိုတော့။ထူးထူးခြားခြား ကိုယ့်ဖက်က အတော်လေးရင်းနှီးစိတ်ဖြစ်မိသား… မယ်သော်တို့…စိန်တိုးတို့အပါအဝင်… လက်ငါးချောင်းစာမပြည့်တဲ့ သူတချို့ကိုတော့… အလကားနေရင်းကို.. အညင်ကကပ်နေမိပြန်ရော…
၀ိုင်းမန့်အားပေးထားတဲ့ ဂဇက်အမျိုးတွေကိုကော အနီအစိမ်းပေးထားသူတွေကိုကော